Kuwa Madarasada Al-Falaaxa Dhisanaya Ma Waxay Moodayaan In Ay KaMacaashayaan
Tuesday July 06, 2021 - 09:36:05 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q: Hamse riiraash
akhristayaasha ayaa salaan diiran gaadhsiinayaa.salaan ka dib waxa aan la hadlayaa dadka reer somaliland gaar ahaan hargaysa madaxdooda mijahooga iyo dhamaan qaybaha Kala duwan ee jooga.
Al-falaaxa waxa ay ahayd bidhaan ka widhwidhaysay hargaysa.iftiin ka baxaysay magaalada .buldhigeeduna ahaa aqoon Taa oo ay ka aflaxayeen qoonyahano Dr iyo madaxba.haa
Waxay ahayd madarasad wacan oo Maan korisa ah .Taa oo ay u hiilin jirtay cilmiga iyo aqoonta.
Dadyowgii ilbaxda iyo hargaysawiyiinta asalkii si fiicanbay u garanayaan madarasadaa iyo taariikhda ay xanbaarsantahay.
Mujaahid cali guray oo ah dadka qayb weyn ka qaatay Dib u xorrayntii dalka iyo Dib u dhiskaba alla cimriga ha u dheerayeebaaba nool oo si fiican u garanaya taariikhda al- falaaxa. ismaaciil dheeg oo ah culimada waaweyn iyo sheikh maxamed aadanbaa jooga oo idinka warami karaba taariikhda Al-Falaaxa iyo madarasadaba.
Madarasadaas waxa aas aasay sheikh axmed cabdilaahi riiraash sheikhii weynaa marna ahaa qoraagii daabacay buuggii uu ciwaankiisu ahaa kishf saduur taariikh can soomaal.marna tafsiirka ka akhrin jiray idaacada radio hargaysa rabbi ha u naxariistee.
Hadda qaarbaa rabba in meeshii madarasad falaaxa ay ku ooli jirtay in ay iska dhistaan kuwaa oo ah wax magarato,aan fahansanayn haddaba waxaan usoo jeedinayaa fariin kuna leeyahay hagu gubanina ka macaashi maysanee Madarasadan waatii ku ooli jirtay xaafada new hargaysa.
Dawladuna waa in degdeg ujoojisaa dhismahaa kuwa dhisanaya waxaan leeyahay caruurtiina xaaran ha u shaqaynina ee xalaal quudsiiya.ogaadana in madarasadaas ay dadi leeyihiin . Dadka reer hargaysee gobtii gobonimaan ku ogohoo aqbali maayaan dulmiga lagu dhisanayo madarasadaasi reer new Hargeisa runta ha u sheegaan kuwa raba in ay dhistaan meeshaas iyagoo xaq iyo xuquuq u haysan.
Dhamaan ganacsadayaashoow dhul halka idin noqon mayso kana macaashi maysaanee hoy ka jooga.